Iindaba-Igama eliphambili lefenitshala yeAmazons "ukwaneliseka"
Igama eliphambili lefenitshala ye-Amazons "ukwaneliseka"
Igama eliphambili lefenitshala ye-Amazons "ukwaneliseka". Ifilosofi yethu yoshishino kukubonelela abathengi ngeyona nkonzo yamava efanitshala yanelisayo. Ukuba abanelisekanga, siya kuqhubeka nokubonelela ngenkonzo yamahhala ade aneliseke umthengi. Inkcubeko engundoqo kukunyaniseka kunye nokunyaniseka kunye nokuphendula ngokukhawuleza kwimibuzo yabathengi.
I-Amazons Furniture yasekwa ngo-2012, ekuqaleni, yayibandakanyeke ikakhulu kwimveliso yeekhabhathi zaseMelika kunye nefenitshala yephaneli. Ngoku sele ingumthengisi wefenitshala ephakathi ekwaziyo ukubonelela ngeesofa ezixhonywe phezulu, ifenitshala yomthi oqinileyo, kunye nefenitshala yeephaneli.
Iinqobo zethu ezisemgangathweni yintliziyo yenkcubeko yethu. Zisebenza njengekhampasi, kuba zichaza indlela yokusebenza. Banika ubunye benjongo kuwo onke amanqanaba okuziphatha kombutho.
Injongo yeFanitshala yeAmazon kukuba ngumthengisi wefenitshala oyingcali. Elona xabiso liphambili kukudibanisa oyena mthengisi wefenitshala ubalaseleyo kuthi ukuze sinikeze abathengi awona mava asemgangathweni ngokukhawuleza nangcono. Ngokuhambelana nobuhle bomthengi, uyilo lugqibelele ifenitshala ethandwayo, nciphisa ixabiso leemveliso, ukuze kuphunyezwe isabelo semarike yefanitshala kangangoko kunokwenzeka.
Ngexesha lobhubhani we-COV-19 ngo-2020, iFanitshala yeAmazons yagxila ekuphuhliseni iimveliso ezintsha ezifanelekileyo kwintengiso kwaye ibeke amandla angakumbi kuphuhliso kunye nemveliso yefenitshala yezilwanyana zasekhaya. Ngoku ifanitshala yezilwanyana ezifuywayo njengezindlu zezinja, izindlu zezinja, iibhedi zezilwanyana zasekhaya, ifenitshala yezilwanyana zasekhaya ezinje ngecushion ithe ngcembe yafumana imakethi entsha.